Modafinil: Kukuphi ukuthenga umgangatho ophezulu weModafinil powder | I-powder powder
/Blog/modafinil/Modafinil: Kukuphi ukuthenga umgangatho ophezulu weModafinil powder
ezaposwa ngomhla 10 / 29 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo modafinil. Ibe 7 Comments.
Modafinil: Kukuphi ukuthenga umgangatho ophezulu we-Modafinil powder eluhlaza
Modafinil Iyeza lonyango lamathambo e-narcoleptics okwandisa ukuphaphama nokuvimbela ukulala. Kwenzeka njalo ukuba kwandiswe ukuqonda kunye nememori, kwaye yongezwa ngamandla kwaye ihlonishwa kakhulu kwicandelo lama-nootropics.
Indlela i modafinil isebenza kuyo phuculaba yakho ingqondo kunye nomoya?
Ngokungafani nezinye izidakamizwa ezihlakaniphile, kukho ubungqina obuninzi bokubuyiselwa iziphumo zeModafinil.
Kuye kwaboniswa ukwandisa ukuxhatshazwa kwakho ukukhathala nokuphucula isimo sakho sengqondo.
Abantu abadala abasempilweni, i-modafinil iphucula "amanqanaba okukhathala, ukukhuthazwa, ixesha lokuphendula kunye nokuphaphama."
Uphando olupapashwe yiYunivesithi yaseCambridge lufumene i-Modafinil ukuba isebenze ekunciphiseni "impendulo", oko kukuthi, izigqibo ezimbi.
I-Modafinil ibuye iphucule ukusebenza kobuchopho ekugqithweni koogqirha abasweleyo.
Kukho ubungqina bokuba uModafinil unceda kuphela abantu abane-IQ engaphantsi, kodwa emva kweminyaka yokuzama, akayi kuvakalelwa ngaloo ndlela.
Njani oku Modafinil kuthathwa kakuhle?
Sebenzisa i-modafinil njengoko iyalwe ngugqirha wakho. Funda zonke iinkcukacha ezinikwe zona. Landela yonke imiyalelo ngokufutshane.
Thatha kunye okanye ngaphandle kokutya.
I-Shift yokulala ingxaki yokulala: Thatha i-1 ngeyure ngaphambi kokuqala komsebenzi.
Ukungahambi kakuhle kunye nokulala ngokulala: Thatha la mayeza ekuseni.
Thatha idosi ephosakeleyo ngokukhawuleza xa ucinga ngako.
Ukuba kusekusondele ixesha lokulala, weqa umthamo olahlekileyo uze ubuye kwixesha lakho eliqhelekileyo.
Musa ukuthatha amaxabiso e-2 ngexesha elinye okanye amaxabiso angaphezulu.
apho to buy umgangatho ophezulu Modafinil?
Khumbulani ukuba kubaluleke kangakanani konke modafinil ityunyiwe esuka eIndiya?
Oko kuthetha ukuba iimveliso ezinikezelwa ezininzi ze-intanethi ze-e-commerce ziyaziwayo. Zonke iiwebhsayithi ze-ecommerce zihlahlela umkhiqizo ofanayo!
Ngoko xa uvavanya umthengisi, awukhathazeki ngomgangatho wemveliso (kuba iimveliso ezizithengisayo ziyafana). Nangona kunjalo, ufuna ukuqiniseka ukuba umthengisi unokwethenjelwa.
Ngokomzekelo, ukuba umyalelo wakho uvalelwe ngamasiko, ngaba umthengisi uya kuphendulwa ngokuxhaswa kwamakhasimende? Ngaba banikela ngokukhululeka ngokutsha xa kukho into engekho njengoko ihleliwe?
Kukho ngoku abathengisi be modafinil kwindawo okwangoku ngoku.I-AASRAW evela e-china.
I-Modafinil powder ebomvu yi-AASRAW yiyona nto ifunwa kakhulu, ininzi kakhulu kwaye iphezulu ye-modafinil kwimarike. AASRAW okwangoku kungcono kakhulu ekuthengiseni i-modafinil ipowder powder inthanethi kunye namawaka abasebenzisi abasebenzisa i-potency.modafinil yi-Eugeroic okanye ngokwemigqaliselo elula, i-agent ekhuthaza ukuvuselela. Imiphumo ye-modafinil iquka ukuvuka, ukuphuculwa kwengqondo, ukuphucula imizwelo, ukuphaphazela kunye kwezinye iimeko zibuhlungu.Ukuba ufuna umgangatho ngaphandle kokutshisa umgodi ephaketheni lakho, thenga powder powder now!
Modafinil: Ndingayifumana njani i-Modafinil powder?
Thenga i-Modafinil powder: Ukutshisa okutshisayo izidakamizwa omele uzazi!
Ngaba ngokwenene i-Modafinil ekuphuculeni i-brainpowder isebenza kakuhle Emva kokuthatha?
I-7 Impendulo Amazwana
Kimberly Horrocks09 / 15 / 2018 kwi-7: 52 ntambama
Ndingathanda ukuthenga i-10grams ye-Modafinil (i-Nootropics) ipowder
UDkt Patrick Young06 / 12 / 2018 kwi-3: 18
Kulungile, Unokutyelela http://www.aasraw.com/contact/ ukunxibelelana nathi.
Cerah06 / 11 / 2018 kwi-3: 24 ntambama
Ndingayithenga njani imichiza oye uyihlolisisa apha njenge sibutramine kunye ne-modafinil? Kwakhona zithathwa ndawonye?
UDkt Patrick Young04 / 26 / 2018 kwi-8: 36 ntambama
Umgangatho ophakamileyo: Njengoko sithembisile, yonke into enobungakanani bethu kunye nokuhlanzeka akukho ngaphantsi kwe-98%.
Tyyler Orrrick04 / 26 / 2018 kwi-6: 53
Ndingathanda ukufumana intengo kwifowder ye-LGD-4033, YK-11, Modafinil, GW-501506, MK-2866, kunye neMK-677. Enkosi.
UDkt Patrick Young03 / 09 / 2018 kwi-8: 42 ntambama
0k, Sizakukubiza emva kweeyure ze-8
Kelly Anderson03 / 09 / 2018 kwi-7: 13
Ndifuna ukufaka imodafinil powder
Kuphi ukuthenga ubungcwele be-stanozolol powder?	Modafinil: Ndingayifumana njani i-Modafinil powder?